"Hooyadey waxay i dhihi jirtay cidna kuma iibsan karto oo qaalibaad tahay" - BBC News Somali
"Hooyadey waxay i dhihi jirtay cidna kuma iibsan karto oo qaalibaad tahay"
Xigashada Sawirka, ERI STUDIOS
"Lacagta ama xoolaha Yarad ahaan gabadha looga bixiyo uma arkayo in loo bixinayo in aniga la igu guursado, sababta oo ah haddii uu qof damca inuu lacag igu iibsado qaali ayaan ku noqonayaa" ayey tiri Angela oo u dhalatay Ingiriiska isir ahaanna ka soo jeedda dalka Ghana.
"Ninka aan guursaday iyo qoyskiisaba iney lacag igu soo iibsadeen iney u arkaan ma rabo, balse waxaan doonayaa iney ii arkaan hanti qaali ah oo qoyskooda ku soo biirtay" ayey tiri Angela.
Nin lagu eedeyey inuu xaaskiisa toorrey ku dilay oo xukun xabsi daa'in ah ka badbaaday
Waalid gabadhooda oo shan jir ah iibiyay si ay wiilkooda u dabiibaan
"Xilligi Afrikaannimada oo keli ah cadaadis lagala kulmi jiray waa laga soo gudbay, xaaladuhu hadda wey isbeddaleen. Waxaan hadda awood u yeelannay inaan dhaqamadeenna Afrika aan shaacinno isla-markaana aan meel marinno."
Angela seygeeda Joffrey oo isna ka soo jeeda dalka Ghana wuxuu ku dhashay dalka Ingiriiska. Wuxuuna aaminsan yahay lacagta Yarad ahaan loo siiyo qoyska gabadha iney tahay oo keli ah 'Gabadhiinna maadaamaa aad na siiseen waad ku mahadsan tihiin' oo wax kale ma aha.
"Haddiise lacagta yaradda aad loo buunbuuniyo yaraddu markaasi ayey micna beeleysaa. Waxayna la mid noqoneysaa adiga oo gabadha lacag ku gatay sidaana ku kaxeystay.
"Hooyadey waxyaaba badan ayey iiga sheekeyn jirtay. Waan xusuustaa carruurnimadeysi 'Adigu ma tihid qof la iib geynayo, oo cidna kuma iibsan karto" ayey tiri Angela.
"Chelsea dhaqankooda sida uu dhigayo lacago iyo hadiyado kale in yarad ahaan reerkeeda loo siiyo dhaqankooda ayaa dhigaya hase yeeshee raalli kama aysan ahayn maadaamaa uu aabbaheed nooleyn. Anigu laakiin marki aan ka dhaadhiciyey ayaan ugu dambeyntii ku heshiinnay inaan yaradda qoyskooda siinno."
Dhaqanka yarad bixintu waa arin aad looga yaqaan dalka Zimbabwe oo dhan, waxaana gabadh caana oo haysata horyaalka tartarkanka dabaasha oo la yidhaa Kirsty Coventry waalidkeed ka dalbadeen ninkii u soo fadhiistay in uu bixiyo sac iyo digaag, halka gabadh uu madaxweyne Mugabe dhalay oo la yidhaa Bona iyadna laga bixiyey yarad dhan kun doolar oo lacag ah iyo 15 neef oo lo' ah.